सुरक्षा परिषद्को बैठक सकियो, के मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ला ? Canada Nepal
सुरक्षा परिषद्को बैठक सकियो, के मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ला ?
काठमाडौं - आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विप्लव समूहलाई लगाईएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न हुने नहुने, चुनाबी सुरक्षा लगायतका बिषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
यस्तै बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसलापछि गरिने सुरक्षा सतर्कताका बिषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । सोमबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीचको भेटवार्ता पनि आज सुरक्षा परिषद् बैठक बसिएको हो ।
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार
अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लब समूह माथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले आफुहरु सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
उनले आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्‍न‍ अवस्थामा पार्टी सरकारसँग सम्वाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
विप्लव वार्ताको लागि तयार भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
फाल्गुण ११, २०७७ मंगलवार १२:५७:२७ बजे : प्रकाशित
# सुरक्षा परिषद्को बैठक